Shina famonoana bibikely elektronika elektronika tsara indrindra any Shina ho an'ny orinasa sy mpanamboatra trano sy birao | Jinjiang
Ny fandavana ny bibikely moka elektronika elektronika tsara indrindra ho an'ny trano sy birao
Karazan-bibikely: Ants, Bats, Cockroache, lalitra, totozy, MOSQUITOES, SPIDERS
Laharana maodely: CT-3033
Karazan-bibikely: Antsirano, ramanavy, kalalao, lalitra, totozy, MOSQUITOES, SPIDERS
Model Model: CT-3033
Anaran'ny vokatra: Holavina ny peste ultrasonic
Fampiasana: Trano + Hotely + Birao
Famatsiana herinaratra: AC90V-240V
Fonosana: Loko boaty ary namboarina
Fitaovana: ABS Plastika
Habe: 88 * 53 * 50 (mm)
Loko: manga, maintso, volomboasary, volomparasy, mavokely ary namboarina
Taratasy fanamarinana: CE ROHS
Karazana fanaraha-maso bibikely: mpanala ny peste ultrasonic
Fahaizana manome: 20000 Unit / Units isan'andro Ny mpanamboatra holatra ultrasonic
Antsipirian'ny fonosana: 1/2/4/6 fonosana amin'ny peste ultrasonic dia lavo ny boaty miloko na OEM
Seranan-tsambo: Yantian, Shenzhen
* Miorina amin'ny haitao farany an'ny onjam-peo ultrasound farany indrindra, ny familiana bibikely toy ny moka, hala, totozy, voalavo, roach, antsa, ivelan'ny tranonao, birao, trano fisakafoanana, trano fanatobiana entana, garazy sns.
* mandaitra sy mora aorian'ny fampiasana 3 herinandro.
* Faritra fampiasana mahomby isaky ny singa hatramin'ny 180 metatra toradroa isaky ny efi-trano tokana
* 100% tsy manimba ny olombelona sy ny biby fiompy, tsy misy fofona, sariaka amin'ny tontolo iainana.
* Fampihenana herinaratra ambany, tsy misy fiatraikany amin'ny fitaovana ao an-trano hafa.
* Mora ampiasaina: atsofohy fotsiny ny socket ary avelao izy hanao ny ambiny.
Holavina ny peste ultrasonic
F1, orinasa na orinasa mpivarotra ve ianao?
A: Tena orinasa izahay, natsangana tamin'ny taona 2003, mpanamboatra matihanina amin'ny fitaovana an-trano an-trano, vokatra lehibe ao anatin'izany ny ultrasonic pest repeller, mpanadio rivotra fiara, fitaovana fikolokoloana hoditra.
F2, Inona ny tombony anananao ary nahoana izahay no tokony hifidy anao?
A: (1) fanandramana manankarena 15 taona, izay mampahalala antsika bebe kokoa ny vokatra sy ny tsena, ary mahalala izay ilainao sy ny entanao.
(2) Amin'ny maha orinasa anay dia tsy mitady tombony be velively izahay, sisiny kely tery hanohanana ny mpiasa sy ny mpiasa no tanjonay, noho izany dia tsy mila miahiahy ianao amin'ny vidiny avo mety azonao avy aminay.
(3) Ny traikefa manan-karena amin'ny OEM & ODM, izay ilainao sy tadiavinao no tena ilainay.
(4) Fahaiza-mamatsy lehibe, seta 20000 / andro, ary azo lehibe kokoa arakaraka ny tinady tena izy.
F3, inona ny fanamarinana anananao?
A: Manana ny fanamarinana ilaina rehetra isika toy ny CE, RoHS, FCC, MSDS, sns na olon-kafa mety ilainao manokana.
F4, azoko atao ve ny manana santionany maimaimpoana hitsapana?
A: Eny, amin'ny fotoana voalohany hiarahanao miasa aminay dia ho voaloa mialoha ny sarany mpandefa iraka ary averinay aminao ny sarany rehefa apetrakao ny kaomandinao voalohany.
F5, inona ny fe-potoana fandefasana anao?
A: Tsy latsaky ny 30% ny fametrahana rehefa voamarina ny kaomandy, ary mandoa ny fandanjalanjana feno alohan'ny fandefasana.
Teo aloha: Amazon tsara indrindra amidy ultrasonic elektronika moka mpamono bibikely famonoana bibikely, mpiaro ny bibikely
Manaraka: Ny fanaraha-maso ny bibikely vaovao an'ny ultrasound repeller dia nanatsara ny fanaraha-maso ny bibikely an-trano amin'ny alàlan'ny hazavana amin'ny alina
Fitaovana fanoherana ny bibikely
Ny fandavana ny Pest Ultrasonic